Nezve ANGJI - Shanghai ANGJI Automation technology Co., Ltd.
Shanghai ANGJI kushandisa michina michina Co., Ltd.ari yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa kutsvakurudza uye kukura, kugadzirwa uye rokutengesa otomatiki zviridzwa. Kambani yedu ine simba R & D simba uye yakakosha kutsvaga nekuwana kune akawanda marudzi echiridzwa uye mita yekugadzira. Tinogona kuona kuti mashandiro ezvigadzirwa ari kuramba achivandudza.
Nhengo dzechikwata chedu dzine chinangwa chakajairika, chinova chekugadzira zvigadzirwa, kuverengera mhando yezvigadzirwa, kushandira vatengi zvakanaka, uye kushingairira, ramba uchifambira mberi uye kushandisa mweya yavo yesimba. Iri boka revanhu rakafanana nepfungwa shanu dzevanhu, vachishanda pamwechete kuchengetedza kupona kwemunhu, kwakakosha.
Isu tiri timu yehunyanzvi. Nhengo dzedu dzine makore mazhinji ehunyanzvi nehunyanzvi kumashure mune zvishandiso, uye dzinouya kubva kumusana we automation vakapedza kudzidza kubva kumayunivhesiti anozivikanwa epamba.
Isu tiri timu yakatsaurirwa. Isu tinotenda zvakasimba kuti mucherechedzo wakachengeteka unobva mukuvimba kwevatengi. Nekutarisa chete ndipo patinogona kuve takachengeteka.
Isu tiri timu ine zviroto. Isu tinouya kubva kumakona ese epasi nekuda kwechiroto chakajairika: kuve mutungamiri akasarudzika muindasitiri yekushandisa. Kupa vatengi zvinhu zvakavimbika uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa.
Shanghai Angji kushandisa michina System Co., Ltd.
"Angji" chiratidzo chakasimbiswa zviri pamutemo mugore rino, uye Shanghai Angji Instrument Co, Ltd. yakavambwa zviri pamutemo.
Mumakore apfuura, Angji's chombo tekinoroji yekugadzira timu yakawedzera, uye zvakateedzana zvakagadzira huwandu hwezvigadzirwa zvitsva uye vakawana akakodzera patent; Chishandiso cheAngji mutengi sosi yakawedzera kumatunhu ese epasi, iine sosi yakagadziriswa yevatengi.
Sekutanga kwekutanga muna 2017, Angji anga achiita zvishandiso kwemakore mazhinji uye anga achinyatsoita basa rechiridzwa chimwe nechimwe, chinangwa chechimwe nechimwe chinhu, uye kugadzirisa matambudziko akasiyana echigadzirwa. Yakatanga kuwedzera musika wepasi rose zviri pamutemo gore rino, uye munguva pfupi ive nenzvimbo yakamisikidzwa yevatengi vekunze.
Mumakore gumi, kambani yakafamba kuburikidza nekukwira nekudzika, uye zvigadzirwa zvayo zviri kuchinjawo. Kubva pakutanga kwezvigadzirwa zvinoverengeka kusvika zvino mazana ezvigadzirwa zvakagadzirwa nechikwata chedu kumusika, uye hunhu hwasvika padanho repasi rose; kambani yakawedzerawo uye yagadziriswa. Songjiang, Shanghai.